မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာမှာ သူတပါးတွေ မသိစေချင်တဲ့ Folder , File , Hard Disk တွေကို လုံခြုံစွာ Lock ချပေးနိုင်တဲ့ Universal Sheld 4.6 Software ~ ITmanHOME
00:59 နည်းပညာ No comments
မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာမှာ သူတပါးတွေ မသိစေချင်တဲ့ Folder , File , Hard Disk တွေကို လုံခြုံစွာ Lock ချပေးနိုင်တဲ့ Universal Sheld 4.6 Software
ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးမယ့် Software လေးကတော့ Universal Shield 4.6 လို့
အမည်ရတဲ့ Security Software လေးတစ်မျိုးပါဘဲ။ မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာမှာ သူတပါးတွေ မသိစေချင်တဲ့
Folder , File , Hard Disk တွေကို လုံခြုံစွာ Lock ချပေးနိုင်တဲ့ Software လေးတစ်ခုပါ။ ဒါလေးကို ကျွန်
တော် MMiTD မှာလည်းတင်ထားပါတယ်။ MMiTD က ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘော်ဒါကြီးတွေအကြောင်းကိုဟာသ
လေးနဲ့ဇာတ်လမ်းဆင်ပေး ရေးထားတဲ့ Post လေးကိုလည်း အမှတ်တရ ကျွန်တော့ Site လေးမှာမူရင်းအ
တနင်္ဂနွေ နေ့လည် 2နာရီခွဲခန့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ MMiTD မှ Member ၀င်များဖြင့် အခြေခံဖွဲ့စည်းထားသော Scorpion F.C ဖူဆယ် ဘောလုံးအသင်းကလေး ကစေားနေကျ အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း ထုံးစံအတိုင်း 15မိနစ်လောက်ကွင်းထဲ
တွင်တောင်ပြေးမြောက်ပြေးနှင့် ပတ်ပြေးပြီး မကစားနိုင်တော့သောကြောင့်ကွင်းဘေး
တွင် ငုတ်တုတ်ထိုင်ကာ ဘေးမှနေပြီး အင်မတန်ကျွမ်းကျင်သည့်ပါးစပ်ဖြင့်သာကန်နေ
သည်။ ထိုအချိန်တွင် ရုံပေါက်ဝမှ ကားယားကားယားဖြင့် ကျွန်တော့်ထံသို့ ဦးတည်လာ
နေသူတစ်ဦး။မည်ကဲ့ သို့မှ မလိုက်ဖက်သော စတိုင်ဘောင်းဘီအနက်နှင့်လည်ကတုံး
အဖြူကိုတောဆန်ဆန် ၀တ်ဆင်လာသူက အသားမည်းမည်းနဲ့ Dr.Ox……….
Phyo: ဟေးးးး ဒေါက်ကြီး ဘယ်ကနေမျက်စိလည်လမ်းမှာလာတာတုန်းဟ။
Dr.Ox: အေးကွ ငါလည်းဒီနားကို လာကြောင်ရင်းနဲ့အဲအဲဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့
လာရင်းနဲ့ ဒီအချိန်ဆို မင်းဒီမှာရှိမယ်ထင်လို့ဝင်လာတာကွ။ ဒါနဲ့ထက်ဇော်ကြီး
တစ်ယောက်လည်း လာမကန်ဘူးလား။ ငါလည်းသူ့ကို အကြွေးပေးဖို့ ရှိတယ်။ သူက
လည်း ငါ့မြင်တာနဲ့ အကြွေးကြီးလှိမ့်တောင်းနေတော့သူ့ကိုပုန်းနေရတယ်။
Phyo: ဒါလည်းဟုတ်တာဘဲဗျ။ ရန်ပုံငွေ လုပ်သင့်တယ်ဆိုပြီး စကားစတာခင်ဗျားရယ်
Dr.Ox: ငါလည်းပေးမှာပါကွ အခုလည်းဘိုင်ကတော်တော်လေးကိုကျနေလို့သူ့ကိုရှောင်နေ
မင်းမှာ ဂွင်ကောင်းကောင်းဘာတွေရှိလည်း။ အခုငါ့မှာ အရေးကြီး အကြောင်း
ရှိနေလို့ ငွေ လိုနေတယ်။
Phyo: ဟိုက်ရှားပါး လုပ်စမ်းပါဦးဗျ။ ခင်ဗျားလို ဘောစိက ငွေလိုနေတယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်
စားသွားပြီ။ ပြောပါဦး ငွေလိုတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြပါဦး။
Dr.Ox: ဒီလိုကွ ငါ့ရဲ့ FM အသစ်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးချင်လို့။
Phyo: ဘာလဲဟ FM အသစ်ကလေးဆိုတာ။
Phyo: တိန်…. သေရောကွာ ။ ဟ ဒေါက်ကြီးရ Girlfriend လုပ်စမ်းပါဗျ။ ဘယ်ကနေ
Dr.Ox သူများတွေသုံးတိုင်း လိုက်သုံးနေရင် ဒေါက်ကြီးဘယ်ဟုတ်တော့မလည်းကွ။ ဒါ
ကြောင့်သူများတွေမသုံးတဲ့ FM ဆိုပြီးအတိုကောက် သုံးလိုက်တာလေမမိုက်
ဘူးလား အဲဒီ FM လေးကို လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ကွ အရေးပေါ်ဆိုတော့ဘယ်လို
လုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာ။မင်းက မဟုတ်တဲ့ နေရာတွေမှာအင်မတန်အကြံအဖန်
Phyo: ကောင်းပါ့ ဒေါက်ကြီးရာ ခင်ဗျားက အကြောင်းပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ဆီဝင်လာတဲ့သ
ဘောပေါ့ ဟုတ်လား။ ခင်ဗျားက MMiTD မှာရန်ပုံငွေထည့်ဖို့တော့ပိုက်ဆံမရှိ
ဘူးFM လေးကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ကျတော့ကြံဖန်နေတယ် ။ တကယ်တော်တဲ့
လူဘဲဗျ။ အေး ဒါလည်းမဆိုးဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်မှာခိုင်လုံတဲ့သတင်းရက်ကွက်က
Dr.Ox: အေးလုပ်စမ်းပါဦးဟ။ စိတ်ဝင်စားတယ်။
Phyo: ကိုထက်ဇော်ကြီး က Laptop တစ်လုံးအပူတစ်ပြင်း ငှားသုံးဖို့ရှာနေတယ်ဗျ။တစ်
Dr.Ox: သူ့မှာရှိတဲ့ Dell Core i7 ကြီးက ဘယ်ရောက်သွားလို့တုန်း။ ဟိုးတစ်လောက
သူ့ရဲ့ ခြောက်ယောက်မြောက်ကောင်မလေးက လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဟာကြီး
Phyo: အဲဒီ Laptop ကြီးက သူ့ရဲ့ အခု ခုနှစ်ယောက်မြောက် ကောင်မလေး
ဖြစ်လာတော့မယ် LA ကကောင်မလေးကို ပိုးကြေးပန်းကြေးအနေနဲ့ငှားထား
တယ်ဗျ။ အခုတော့ တကယ်တမ်း အလုပ်လုပ်ဖို့လည်းလိုရော ကိုထက်ဇော်ကြီး
Dr.Ox: ဟဟဟဟဟ ထက်ဇော်ကြီးက ဘယ်ကနေ နိုင်ငံခြားကကောင်မလေးနဲ့တွေ့သွား
ရတာတုန်းကွ။ပိုင်သကွာ အမေရိကန်ကကောင်မလေးနဲ့တောင် ငြိတော့မယ်ပေါ့
Phyo: ဘယ်က အမေရိကန်ကကောင်မလေးလည်းဗျ။ LA ဆိုတာ လက်ပွတ်တာ အောက်
ပိုင်းလို့ အတိုချုန်းပြီးပြောတာ။ ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျား FM လို့ ပြောသလိုမျိုး
Dr.Ox: ဟားဟားဟား ဒါဆိုတောသူလေးပေါ့ ဟုတ်လား။
Phyo: တောသူလေးဆိုပေမယ့် လည်းလျှော့မတွက်နဲ့နော် တော်တော်လေးတော့လည်း
အမေးအမြန်းထူတာဘဲ။ အဲဒါနဲ့ဘဲ ကိုထက်ဇော်ကြီးက Laptopတစ်လုံးငှားဖို့လိုက်
ရှာနေတာပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားမှာလည်း လက်တော့ရှိနေတာဘဲ ငှားလိုက်ပါလား။
အခုသူက ငွေလျှံနေတာနော်။ ခင်ဗျားက ငှားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုးသောင်းတစ်ခါ
Dr.Ox: မဆိုးဘူးကွ။ မိုက်တယ်။
Phyo: ဒါဆိုလည်း အခုသွားပေးလိုက်လေဗျာ။တော်ကြာနေ သူများဆီကငှားလိုက်မှဖြင့်
Dr.Ox: မဖြစ်သေးဘူးကွ။ အခု ငါ့ရဲ့ Laptop ထဲမှာ ဘယ်သူမှတွေ့လို့မရတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်
တွေပါတယ်။ ပြီးတော့ ငါ့ရဲ့ ကောင်မလေး ပုံလေးတွေလည်းပါတယ်။ ဒီပုံတွေကို
ထက်ဇော်ကြီးတွေ့သွားလို့မဖြစ်ဘူး။ ငါ့ရဲ့ ကောင်မလေးတွေက အရမ်းချောနေ
Phyo: အေးကောင်းတယ် ။ နောက်မှသွားပေးမယ်ဆိုပြီး ခင်ဗျား နေ့ညရွေ့နေရင်တော့
သေချာတယ်။ ဂွင်ကောင်းကောင်းလွတ်ပြီ။ ခင်ဗျား USB နဲ့ဖြစ်ဖြစ် DVD
Dr.Ox: အဲလိုလည်းလုပ်လို့မရဘူးကွ။တချို့ ငါ့ရဲ့ Data တွေက အများကြီးဟ။
အကုန်ပေါင်းလိုက်ရင် 100GB လောက်ရှိတယ် လျို့ဝှက်ချက်တွေ။
Phyo: အင်း………………… ဟက်ကင်းတွေထင်ပါ့ဗျာ။
ကျွန်တော့်မှာ အကြံကောင်းတစ်ခုရှိတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ Data တွေကိုလည်း
ဘယ်သူမှမဖွင့်နိုင်အောင် ပြီးတော့ ခင်ဗျားလည်းအခုချက်ခြင်း ကိုထက်ဇော်ကြီး
ဆီကို သွား ပြီးLaptop ငှားနိုင်အောင်လို့ ခင်ဗျားရဲ့ Data တွေကို Universal
Shield နဲ့ပိတ်ထားလိုက်ပါလား။ဒါဆို တစ်ချက် ခုတ် နှစ်ချက်လောက်ပျက်ပြီဗျ။
Dr.Ox: ဟားးးးးး ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံကွာ။ ပိုင်သကွ။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့
Universal Shieldက Window7ရောရရဲ့လားကွ။
Phyo: ရတာပေါ့ဗျာ။ သိပ်ရတာပေါ့။ ကိုချစ်ကြီးဆီကနေ တောင်းထားတာ။
Dr.Ox: ဟေ ကိုချစ် ဆီက ဟုတ်လား ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်ချသွားပြီဟေ့။
အချစ်လေးဆီကဆိုရင်တော့ အကြွင်းမဲ့ စိတ်ချသွားပြီ။ OK
Phyo: ပါတာပေါ့ဗျာ။ ရော့ရော့ရော့ USB ခင်ဗျား ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဘဲ ဆက်ဆွဲ
လိုက်တော့ ။ ကျွန်တော် ဘောပွဲကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ငါတို့
Dr.Ox: ကဲ ပြီးသွားပြီ ပြည့်ဖြိုးရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကွာ။
နဲ့တိုးနေဦးမယ်။ သွားပြီ ဟေ့။
Phyo: ဟေ့ဟေ့ဟေ့ ဒေါက်ကြီး နေဦးဗျ ခင်ဗျား ပိုက်ဆံ ရရင် ကိုထက်ဇော်ကြီးဆီမှာ
MMiTD အတွက် ရန်ပုံငွေထည့်သွားဦးနော်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားကျွန်တော့်ကို
ချယ်လ်ဆီးပွဲ အကြွေးဆပ်ရဦးမယ်။ မှတ်မိသေးလား ကြက်ဆီထမင်း။
Dr.Ox: တော်ပြီကွာ စိတ်ပြောင်းသွားပြီ မထည့်တော့ဘူး FMလေးကိုလည်း
မပေးတော့ဘူးကိုယ့်ဖာကိုဘဲ အိမ်မှာ ဂရမ်းလေး နဲ့ ချမ်းအရှည်လေးထောင်ပြီး
Phyo: တိန် သေရောကွာ ခံလိုက်ရပြီ။ အေးအေးအေး တွေ့မယ်ဒေါက်ကြီးခင်ဗျား
ဒီလိုနဲ့ဘဲ Dr.Ox ကြီးတစ်ယောက် ကွင်းထဲကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်ဗျာ။ Dr.Ox ကြီး အသုံးပြုသွားသော Universal Shield အား MMiTD မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံး အလားတူ လှျို့ဝှက်ချက်များ ဖွက်ထားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှ ဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ပြတော့ပါဘူး။ ဒီအဆင့်လေးကတော့ Install လုပ်နေချိန်မှာဘဲ Password ရိုက်ရမှာ
ပါ။ တူညီတဲ့ Password နှစ်ခုကို ရိုက်ပေးပါ။သေချာရိုက်ပါ မမေ့ပါစေနဲ့။
Install လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Restart ချလိုက်ပါ။
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Patch File လေးပါ
ဒါလေးကို မဖွင့်ခင် Antivirus ကိုပိတ်ထားပေးပါ။ ပြီးသွားပြီဆိုရင် Patch File ကို
ကူးပြီး C ထဲက Program File ထဲက Universal Shield ဆိုတဲ့ Folder ထဲကိုကူးထည့်
ကူးထည့ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Patch ဆိုတာလေးကို
နှိပ်ပေးပါ။ Successful ဆိုပီးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆို Full Version ဖြစ်သွားပါပြီ။
Universal Shield ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်ပေးပါ။ အခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် show Tips at startup
ကိုအမှန်ခြစ်လေးဖြုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Close ကိုနှိပ်ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ Folder ကိုဖွက်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Hide ကိုရွေးပေးပါ။
ကျွန်တော်က နမူနာ Folder ကိုဖွက်ထားမှာဖြစ်လို့ Folder ကိုရွေးပေးတာပါ။ File တွေ
Hard Disk တွေကိုလည်း ဖွက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က Data D: ထဲက Universal ဆိုတဲ့ Folder ကို နမူနာ ဖွက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
Add to List ကိုနှိပ်ပြီး ရွေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာမြင့်ရတဲ့အတိုင်း Lock ချပြီးသွားပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ နည်းနည်လေးပြောပြချင်တာ
လေးကတော့ Password Change မလားလို့မေးတဲ့ Message Box ကျလာပါလိမ့်မယ်
အဲဒါလေးကိုတော့ မိမိတို့စိတ်ချ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ မပြောင်းချင်ဘူးဆိုရင်လည်း အဲဒီ
Message Box ကို ပိတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Unlocked လုပ်ချင်ရင်လည်း အဲဒီ သော့လေးကိုဘဲနှိပ်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် Folder တွေ File တွေ Hisk Disk တွေကို Lock ချချင်တယ်ဆို၇င်တော့ Protect ကိုနှိပ်ပြီးအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့
ဒီSoftware လေးကို ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုတော့
၁။ Unlock လုပ်ပြီးသွားလို့ မေ့ပြီး Lock ပြန်မချမိဘူးဆိုရင်တော့ ပြသာနာမရှိပါဘူး
ကွန်ပြူတာ Restart ကျသွားပြီးရင် အလိုလို Lock ကျသွားမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒီ Software ကိုဖြုတ်ချင်တယ် (Uninstall) ဆိုရင်တောင်မှ သူ့ရဲ့ Password ကိုသိမှဘဲUninstall လုပ်
Link သုံးမျိုးနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Download From Deposit File
လေးမှာ ပါဝင်ကစားချင်တဲ့ ဖူဆယ်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကစားနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအား
ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ မကျေနပ်တဲ့ အချက်လေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ ကိုထက်
ဇော်ကြီးနဲ့ Dr.Ox နှစ်ဦးစလုံးဟာ အခုအချိန်မှာ ကောင်မလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ဝိုင်းဝိုင်းလည်
နေတဲ့ ဆော်ကြည်ဘဲကြီးတွေဖြစ်နေချိန်မှာ။ ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုး လေးတစ်ယောက်မှာ
ကိုချစ် ကိုယ့်ညီလေးကိုကြည့်နေနိုင်ရက်တယ်ဗျာ။ ပေးသမျှအကြံတွေကလည်း
အချုပ်ထဲကျမယ့် အကွက်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာရောက်မယ့်အကွက်တွေချည်းဘဲ
ဪ ................... လောကကြီး လောကကြီး မတရားလိုက်တာနော်။.............